भ्यागुतोले विश्वकै विषालु सर्पलाई निलेपछि हेर्ने मानिसको भिड ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/भ्यागुतोले विश्वकै विषालु सर्पलाई निलेपछि हेर्ने मानिसको भिड !
काठमाडौ, असार १९- हालै सामाजिक संजालमा एक अनौठो तस्विर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक तस्विरमा एक भ्यागुतोले केहि मिनेटमै विषालु सर्प निलेको छ । उक्त घटना अष्ट्रेलियाको हो । अष्ट्रेलियामा एक भ्यागुताले सबैभन्दा विषालु सर्प एकै मिनेटमा निलेपछि हेर्ने मानिसको भिड लागेको थियो ।
यो भ्यागुतोले सर्प निल्दै गरेको भिडियो एक महिलाले कैद गरेर सामाजिक संजाल मार्फत शेयर गरेकी हुन् । उनले आफ्नै घरको पछाडि बिश्वकै विषालु सर्पलाई भ्यागुतोले निलेको बताएकी छिन् ।
गाँउ घरमा सर्पले भ्यागुतो निलेको त हामिले सुनेका छौ तर अष्ट्रेलियामा भने भ्यागुतोले सर्प निलेको तस्विर भाइरल भएको छ तस्विर शेयर गरेको केहि घण्टामै धेरैले हेरिसकेका छन् । उक्त महिलाले सर्प र भ्यागुतोलाई छुटाउने धेरै प्रयास गरेपनि सर्प मरिसकेकोले निकाल्न नसकेको बताएकी छिन् ।
घरमा दुई पत्नी हुँदाहुँदै अर्कैकी पत्नि लिएर वडाअध्यक्ष टाप, नाका नाकामा प्रहरी बसेर गर्दैछ भगौडा जोडीको खोजी